Politika momba ny tsiambaratelo - Kinne Maskinteknik AB
Sarotra sy manaiky
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mamaritra ny fomba hanangonantsika, hampiasantsika, fitehirizana, hanambarana sy hiarovan'ny mombamomba anao manokana. Mihatra amin'ny tranokala rehetra, serivisy sy serasera sy fifandraisana an'ny Kinne Maskinteknik AB izay misy ny fanondroana an'io politika momba ny fiainana manokana io, na inona na inona fomba hidinao na ampiasanao azy ireo.
Amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mampiasa ny teny hoe "angon-drakitra manokana" isika hilazana ny fampahalalana izay afaka mamantatra mivantana ny olona iray voajanahary.
Amin'ny fanekena io Politika momba ny fiainana manokana io dia manaiky ianao fa afaka manangona, mampiasa, manambara ary hitahiry ireo angon-drakinao manokana amin'ny fomba voalaza ao amin'ity Politika momba ny fiainana ity.
Tranonkala fahatelo: Ny pejy sasany ao amin'ny tranokalan'i Kinne Maskinteknik AB dia misy rohy mankany amin'ireo tranonkala antoko fahatelo. Ireo tranonkala ireo dia manana ny politikany manokana ary ny Kinne Maskinteknik AB dia tsy tompon'andraikitra amin'ny asany. Ireo mpampiasa izay mandefa fampahalalana na amin'ny alàlan'ireo tranonkala fahatelo ireo dia tokony handinika ny politikan'ny tsiambaratelo amin'ireo tranonkala alohan'ny handefasana ny mombamomba azy manokana.
Mpampiasa data manokana
Kinne Maskinteknik AB, Soeda, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Soeda no tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitra manokana. Kinne Maskinteknik AB dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny angon-drakinao manokana ary amin'ny fanomezana ny serivisy homena mifanaraka amin'ny fotokevitra napetraka tao amin'ity Politika miafina ity.
Fanangonana rakitra manokana
Raha mividy miaraka aminay ianao na mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mail, telefaona, fampisehoana varotra na amin'ny fitsidihana dia manaiky ny hizara ny angon-drakinao manokana ianao ary manaiky fa hampita izany ao amin'ny mpizara any Sweden.
Notehirizinay ireto karazana fampahalalana manaraka, anarana, adiresy, kaody paositra, adiresy paositra, adiresy mailaka, laharana finday, nomeraon-telefaona,
Ny vaovao atolotrao anay
Notehirizinay ny fampahalalana toy izany izay atolotrao amin'ny tranokalanay na natolotray aminao raha mifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona, amin'ny toeram-barotra, na amin'ny fitsidihana. Anisan'izany:
anarana, adiresy, postcode, tanàna, firenena, adiresy mailaka, laharana finday, isa finday.
fampahalalana momba ny fandefasana, fampahalalana momba ny fandoavam-bola, fampahalalana momba ny fandoavam-bola sy fampahalalana hafa izay atolotrao amin'ny fividianana na fandefasana vokatra iray ary raha toa ka omena amin'ny alàlan'ireo rafitra ampiarahintsika ny serivisy fampidirana, ny vaovao momba ny fandefasana (ny sata fandefasana) notahirizin'ilay mpiara-miasa voafantina;
ny fampahalalana momba ny fifanakalozan-dresaka amin'ny forum, amin'ny telefaona, chat, vahaolana amin'ny alàlan'ny fifandirana, fifanarahana amin'ny alàlan'ny tranonkalantsika na ny iraka nalefanay taminay.
Ny tanjon'ny fampahalalana dia tokony ho afaka hanao mividy ianao ary afaka manome anao serivisy ho an'ny mpanjifa.
Amin'ny fanekena io Politika momba ny fiainana manokana io dia manamafy ianao fa mety hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay:
misoroka, mamantatra ary manadihady hosoka, trangan'ny filaminana, mety ho voarara na zavatra tsy ara-dalàna.
mifandray aminao, amin'ny alàlan'ny mailaka, taratasy na an-telefaona hamahana ireo fifandirana, na ho an'ny tanjona hafa avelan'ny lalàna;
ampitahao ny fampahalalana mba hanamarinana ny marina ary manamarina izany amin'ireo antoko fahatelo;
manome anao serivisy hafa izay angatahinay ary voafaritra rehefa manangona ny vaovao izahay; ary
miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mivantana ny varotra aminao aminao amin'ny fandefasana ny varotra momba ny vokatra Kinne Maskinteknik AB.
valio ny fangatahanao, ohatra, ny hifandraisanao aminao momba ny fanontaniana izay nalefanao tany amin'ny serivisin'ny mpanjifa;
Mampiasa angon-drakitra manokana ho an'ny tanjona marketing
Noho ny fahazoan-dàlana nalaina araky ny fitsipika azo ampiharina sy ity politikanao ity dia mety hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay;
ampahafantarinao anao ny momba ny vokatra sy serivisinay;
andefaso tolotra momba ny marketing sy ny fampiroboroboana miankina amin'ny tianao;
ary manaova ny serivisy
Izahay dia tsy mivarotra na manambara ny mombamomba anao amin'ireo ankolafy fahatelo ho an'ny marketing.
Farano ny fampiasantsika angon-drakitra manokana ho an'ny tanjona marketing
Raha tsy te-hahazo tolotra marketing sy dokam-barotra avy aminay izahay dia ampahafantaro anay sales@kinnemaskinteknik.com.
Azonao atao ny mamaky ny anay Cookie politika raha mila fampahalalana misimisy momba ny fampiasana ireo ao amin'ny pejinay.
Fampisehoana ny angon-drakitra manokana
Izahay dia manambara ny angon-drakitra manokana mba hanatanterahana ny adidy ara-dalàna. Ny fampahalalana toy izany dia hambara afa-tsy amin'ny lalàna sy fitsipika mifandraika amin'izany.
Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao manokana:
Subcontractors izay manampy antsika hampandeha ny orinasa (toy ny tsy voafetra ho an'ny, serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fanadihadian'ny hosoka, fanangonana invoice, haulage ary ny fanaovana ny tranokala).
Fahefana mpanara-maso, fahefana an'ny polisy, na fety fahatelo miangatra, mba hamaliana ireo fanontaniana mifandraika amin'ny famotorana amin'ny heloka bevava na fanenjehana tsy ara-dalàna na hetsika hafa izay mety hiteraka fanovana ho anay na aminao. Amin'izany toe-javatra izany, arak'izay eken'ny lalàna ampiharina, dia hampahafantarinay ireo fampahalalana mifandraika sy ilaina amin'ny fanadihadiana, toy ny anarana, laharana fiarovana ara-tsosialy, tanàna, fanjakana na faritany, adiresy paositra, laharana an-tariby, adiresy mailaka, tantara momba ny anarana, adiresy IP, fitarainana hosoka sy tantaram-barotra.
Orinasa mitatitra fampindram-bola izay ahafahantsika mitatitra vaovao momba ny fividiananao, tsy fandoavam-bola na fandikan-dalàna hafa ao amin'ny kaontinao izay mety ho hita ao amin'ny tatitra ataonao amin'ny alàlan'ny alalàn'ny lalàna.
Orinasa hafa raha mitambatra isika na ho azon'izany orinasa izany. Raha sanatria ka hitranga izany dia mila ny orinasa vaovao izahay hanaraka ny Politika momba ny tsiambaratelo momba ny fizarana ny data-nao. Raha hampiasa na hampahafantatra ireo antontan-taratasinao manokana ny zavatra momba ny zavatra hafa ankoatr'izay voalaza ao amin'ity politika ity ny angon-drakitrao manokana dia hampandre anao izahay ary raha ilaina izany dia mangataka ny fanekenao.
Ny famindrana angon-drakitra manokana
Mitahiry sy mizara ireo angon-drakinao manokana amin'ireo mpizara izahay any Soeda.
Fiarovana sy fitahirizana angon-drakitra manokana
Mampiasa ny fepetra fiarovana ara-batana, ara-teknika ary fandaminana isika, mifandray amin'ny habetsahana sy ny fahatsapan'ny angon-drakitra manokana, mba hisorohana ny fanodinana tsy nahazoana alàlana, anisan'izany saingy tsy voafetra amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana, ny fahazoana ary ny fampiasana, fatiantoka, mamafa na fanimbana ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa. Ny sasany amin'ireo fepetra fiarovana ampiasainay dia ny kitay hazo, fiarovana ny otrik'aretina, ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ara-batana amin'ny endrika vata fiarovana / safosafo.
Famafana ny angon-drakitra sy ny fitahiry ny angon-drakitra manokana
Noho ny fangatahanao ary mifanaraka amin'ny fepetra ao amin'ity fizarana ity, hamafa ny fampahalalana momba anao izahay raha haingana. Ny famafana ny data dia hatao mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'izany.
Azontsika atao ny mitazona tahirin-kevitra momba ny olona sy orinasa raha:
manana tombotsoa ara-barotra ara-dalàna isika ary tsy voararan'ny lalàna, toy ny famerenam-bola be loatra, ny fikatsoana vahaolana amin'ny fifandirana
adidy isika hitana ny angon-drakitra manokana mba hanatanterahana ny adidy ara-dalàna toa ny fanarahana ny lalàna eo an-toerana, ny hosoka ary ny fanodinam-bola, na handray fepetra hafa avelan'ny lalàna.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny tahirin-kevitra momba ny tena manokana dia hoentina miadana ary raha izany no ilaina.
Miankina amin'ny fameperana napetraky ny lalàna momba ny fiarovana ny data EEA, manana zo sasany momba ny angon-drakinao manokana ianao. Manana ny zon'ny fidirana, fanitsiana, famerana, fanoherana, fanesorana ary fahatapahan-kafatra data ianao. Azafady mba mifandraisa aminay raha te hampiasa an'ity zo ireo ianao. Raha te hangataka ny fidirana amin'ny mombamomba ny mombamomba anao izahay, dia mba iangaviana eo fa ilaina ny fampahafantarana sary efa ilaina mba hanaporofoana ny mombamomba anao.
Ianao dia afaka Mifandraisa aminay amin'ny Internet amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy voavaly ny fanontaniana amin'ny Internet dia afaka manoratra aminay ianao: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Suède.
Raha tsy afa-po amin'ny fomba iatrehana ny fanontanianao ianao, manan-jo handefa fitarainana any amin'ny Data Inspectorate ianao.